Ngwa ọkụ ọkụ
Igwe ọkụ mmiri
Ngwa ndị na-ekpo ọkụ mmiri
Kedu ihe e ji mara ndị na-ekpo ọkụ mmiri oyi efu gas?
Igwe ọkụ mmiri oyi efu agaghị emepụta mmiri oyi mgbe ejiri ya.Nke mbụ, maka ndị na-ekpo ọkụ mmiri nkịtị, e nwere ebe dị anya n'etiti ọkpọkọ na mmiri ọkụ, a ga-enwekwa mmiri oyi fọdụrụ na pipeline.Oge ọ bụla ị na-eji mmiri ọkụ, ị ga-...
Ọdịiche dị n'etiti igwe na-ekpo ọkụ ọkụ na mmiri ọkụ gas?
N'ịbụ ndị na-aga n'ihu na oge, enwere ọtụtụ nhọrọ, dị ka ọkụ ọkụ ọkụ eletrik, mmiri ọkụ gas na ike anyanwụ, wdg. Kedu nke dị mma karịa ka ọ dị mma iji mee ihe?Ka anyị lelee ngụkọta n'okpuru!1. Ntụle ọnụ ahịa gbakọọ site na ọnụahịa naanị,...
Kedu ihe ọghọm ndị na-ekpo ọkụ mmiri gas?
Site na mmụba nke sayensị na teknụzụ, ọnọdụ obibi ndụ na ọnọdụ ndị mmadụ emeziwanyela nke ukwuu.Dịka ọmụmaatụ, n'oge oyi, ndị mmadụ nwere ike ịsa ahụ n'ụlọ nke aka ha, na ịnweta mmiri ọkụ n'oge oyi adịghị anya maka ọtụtụ ndị.Ọ bụ ihe siri ike, mana ...
adreesị:No.323 Dongfeng Avenue South, Dongfeng Town, Zhongshan City, PRChina